म’हिलाहरुको यी अंग छुदा आफैं स:म्बन्धका लागि अ:पिल ग’र्छन [६ टिप्ससहित] – Sanjal Nepal
Homeसमाचारम’हिलाहरुको यी अंग छुदा आफैं स:म्बन्धका लागि अ:पिल ग’र्छन [६ टिप्ससहित]
म’हिलाहरुको यी अंग छुदा आफैं स:म्बन्धका लागि अ:पिल ग’र्छन [६ टिप्ससहित]
December 7, 2020 admin समाचार 1718
म’हिलाहरुको यी अंग छुदा आफैं स:म्बन्धका लागि अ:पिल ग’र्छन [६ टिप्ससहित]म’हिलाहरुको यी अंग छुदा आफैं स:म्बन्धका लागि
अ:पिल ग’र्छन [६ टिप्ससहित]
शा:रीरिक सम्बन्ध प्राय मानिसको आधारभुत आवश्यकता भैसक्यो । मानव जिवनमा स:म्बन्ध
राख्नु धेरै नै आवश्यक हुन्छ । शा:रीरिक स:म्बन्ध रा:ख्न पुरुषहरु खु:ल्ला रुपले प्र’स्तुत हुन्छन भने महि:लाहरु लजाउने गर्दछ्न । म:हिलाहरु का य:स्ता अ:ङ्ग हरु छु:दा आफै स:म्बन्धको लागि अपिल ग’र्दछन : १ स्त:नको
पूरा भिडियो हेर्न यहाँ तल क्लिक गर्नुहोला
तपाई यो झट्ट सुन्दा अचम्म लाग्न पनि सक्छ । तर अचम्म मान्नु पर्दन । लवाई खवाई नै फरक छ । देख्दा हट्टाकट्टा पनि छन । कुरा गराई पनि एकदमै फरक छ । पोखराका २८ बर्षिय मनोज क्षेत्री नाम परिवर्तन को गेटअप हो यो । शहरका पुरुष यौ’नकर्मी उनको स’म्पर्कमा हप्तामा ४ ५ जना
महिला आउने गर्छन । उनीहरुसंग स’म्पर्क पनि हुने गर्छ । अधिकां’श महिला उनलाई खोज्दै आउछँन् भने कतिपयलाई उनी पट्याउँछन् ।
आफुलाई पुरुष कर्मी भन्न नरुचाउने उनले तिर्खाएकोलाई प्यास मे’टाएको मात्र बताए । मलाई खोज्दै आउँछन उनीहरु प्राय संग सम्प’र्क हुने गर्छ एक होटलमा साथीसंगै महिलालाई पर्खिएर बसेका उनले भने कतिलाई त पट्याइन्छ तर धेरै महिलाहरुले खोजेर आउने गर्छन । उनको दैनिकी नै फरक छ । हरेक दिन उनको भिन्दै तवरले बित्छ ।
समय मिलाएर उनीहरुसंग स’म्पर्क गर्ने गरेको उनले बताए ।मोवाइलबाटै सबै कुराकानी हुने र भेट हुने उनको भनाई छ । उनीहरुले सामान्यदेखि महंगा होटल बुक गर्ने गर्छन । कतिपय विबाहित महिलाहरुले भने कोही नभएको मौका छोपेर घर अथवा आफु बस्ने कोठालाई नै उपयुक्त स्थान बनाउने गरेको पाइन्छ । विबाहित मनोजले छुट्टै व्यवसाय गरेपनि त्यो भने देखाउनको लागि मात्र हो । सन्तुष्ट बनाए बा’पत्त महिलाहरुबाट पाउने रुपैयाले नै उनलाई घर परिवार
चलाउन मोबाइल रिचार्ज मोटरसाईकलको खर्च तथा विभिन्न खर्च गर्नमा सहयोग पुगेको छ ।
फुर्सदै हुदैन समय मिलाउनै गाह्रो हुन्छ मनोजको आडैमा रहेका अर्का पुरुष कर्मी नवीन गुरुङ नाम परिवर्तनले भने मोवाइलबाटै सबै कुरा हुन्छ अनि समय मिलाएर होटलतिर गइन्छ । उनीहरु दुवैको सम्पर्कमा धेरैजसो विबाहित महिलाहरु आउने गरेका छन् । ३५ ४० बर्ष उमेरसम्मका महिलाहरु आफ्नो स’म्पर्कमा आएको गरेको उनले बताए । करिव तीन बर्षको उनको यात्रामा हालसम्म करिव ४ सय महिलाहरुसंग सम्पर्क भएको मनोजले अनुभब सुनाए ।मैले शुरु गरेको ३ बर्ष बित्नै लाग्यो उनले अगाडि रहेको साथीलाई सोध्दै भने ४ सय त काटे
होलान । अहिले क्षेत्रीको सम्पर्कमा नियमित १५ २० जना विबाहित महिला छन् । ग्राहकमा ६० प्रतिशतभन्दा बढि बिदेश श्रीमान हुनेका श्रीमति रहेका छन् भने अन्य विभिन्न जागिर तथा पेशामा आवद्ध महिला रहेको उनीहरुको भनाइ छ । कर्मीहरु भन्ने बित्तिकै मनमा महिलाको तस्बिर आउछ । सञ्चारमाध्यम लगायतका विभिन्न क्षेत्रमा पनि महिला कर्मीकै चर्चा हुन्छ
कसकी दुलही बनीन केकी अधिकारी ? (भिडियो सहित)
December 23, 2020 admin समाचार 1249
बैदेशिक रोजगारिमा दैवले हात र खुट्टा चुʼडेर लग्यो, २ छोरीलाई काखमा च्यापेर चुहिने खरको छानो मुनी बाट बाबाले पिडा पोखे गुल्मी सत्यवती गाउपालिका वार्ड न १ अस्लेवाका यादब पाण्डे १० बर्ष पहिले भारत गए ।
बिहे पछी मात्रै महिलामा आउने यस्ता अनाैठा परिवर्तन कारण थाह पाउदा पर्नुहुनेछ अच्चमित !
December 19, 2020 admin समाचार 2269
प्राय जसो बिहे पछी महिलाहरुको शारीरिक परिवर्तन हुनु स्वाभाविक नै मानिन्छ । विशेष गरि बिहे पछि महिलाको जिन्दगीमा धेरै परिवर्तन आउँछ । उनीहरुको बोली चाली देखि हरेक कुरामा परिवर्तन देख सकिन्छ ।साथै बिवाह पछी महिलाहरुको
January 19, 2021 admin समाचार 6054
काठमाडौं । चर्चित बलिउड अभिनेत्री नेहा शर्माको वर्ष दिन पुरानो तस्बिर अहिले खुबै भाइरल भइरहेको छ । नेहाले ट्वीटरमा आफैंले एउटा सेल्फी पोस्ट गरेकी थिइन् । यो फोटो कुनै होटलको कोठाको जस्तो देखिन्थ्यो । बलिउडको
LEX 18 agenda conversation: Job club (444754)
सञ्जेललाई कुटपिट गर्ने कर्मचारी बर्खास्त, अभद्र व्यवहार मुद्दामा म्याद थप (418337)
Hello world! (345718)
A above Googler and career teach says you shouldn’t at all times flip your ardour intoaabounding-time job (318534)
dole traces grow as seasonal jobs dry up (115234)
Technology Training Company Coding Dojo to Open Boise Campus at Trailhead (105638)